Hirdanka u dhaxeeya Iran iyo Sacuudiga oo ka qarxay dal kale oo Asia ku yaalla. – Xeernews24
Hirdanka u dhaxeeya Iran iyo Sacuudiga oo ka qarxay dal kale oo Asia ku yaalla.
13. September 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Iran iyo Sucuudiga waxa ay u xusul duubayaan sidii ay saameyn ugu yeelan lahaayeen dowladda cusub ee Pakistaan taas oo uu hoggaaminayo Imran Khan.
Labadaba dano ayey ka leeyihiin, yeelkeede, Sucuudiga waxaa wiiqay dagaalka Yaman oo aan laga jecleyn Pakistan.
Pakistan waxa ay ku taal meel muhiim u wada ah Riyaad iyo Tehraan. Pakistaan waa wadanka labaad ee ugu Muslinka badan aduunka wana wadanka qudha ee Muslinka ah ee haysta hubka Nukliyeerka. In ka badan 1.5m oo Pakistaniyiin ah ayaa ku nool Boqortooyada.
Saaxiibo dhaw ayey ahaayeen Pakistan iyo Sucuudiga, balse waxa uu xidhiidhkooda xumaaday wixii ka dambeeyey dagalka Yaman.
Shaqsiga qudha ee sida muuqata uga soo horjeeda xidhiidhka boqortooyada ee ku jira xisbiga cadaaladda waa Shireen Mazari, waxa ay ka soo qallin jabiyey dugsiga dhaqaalaha ee London iyo Jaamacadda Columbia, hadda waa wasiirka arrimaha bini’aadannimada ee xukumadda Khan.
Sucuudiga iyo Iran waxa ay xidhiidhdho qotodheer la leeyihiin maleeshiyaadka Sunniga iyo Shiicadda, ku was oo xaaladda gudaha Pakistan qarxin kara.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/11/labo.png 549 976 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-09-13 10:34:382018-09-13 10:34:38Hirdanka u dhaxeeya Iran iyo Sacuudiga oo ka qarxay dal kale oo Asia ku yaalla.
Dhacdo Argagax leh oo ka dhacday magaalo ku taal dalka Hindiya (Daawo Sawir... R/W Abiy Ahmed Oo Si Cajiib Ah Uga Hadlay Badelida Calanka Dawlad Deegaanka...